Xinhua Myanmar - “စစ်အေးတိုက်ပွဲ ပုံစံဟောင်း ပြန်လည်ကျင့်သုံးခြင်းက ခေတ်မမီတော့ပါ”
တရုတ် အမေရိကန် ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Guancha.a
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး လဲ့ယွိချန် ( Le Yucheng ) အားတွေ့ရစဉ် ( ဆင်ဟွာ) Politics, Law & Military
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး လဲ့ယွိချန် (Le Yucheng) နှင့် Guancha.cn တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုပြုလုပ်နေစဉ်(ဓာတ်ပုံ- တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန)
Guancha : မကြာသေးခင်က အမေရိကန်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့ သိက္ခာချဖို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ လုပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဟာ ပရမ်းပတာ ထင်ရာမြင်ရာ ပြောဆိုတာမျိုးထက် ပိုပြီး ဆိုးရွားလာတယ်။ အချို့သော အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အခြေခံဥပဒေတွေနဲ့ စည်းမျဉ်းတွေွ ၊ သံတမန်စံနှုန်းတွေ နဲ့ နိုင်ငံရေးကျင့်ထုံးတွေကို ပစ်ပယ်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံရေးဆိုးသွမ်းလူငယ်ပုံစံမျိုး ပြုမူကျင့်သုံးနေခဲ့တယ်။ အဲဒီလို အရည်အချင်းညံ့ဖျင်းတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေအပေါ်မှာ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်ပါသလဲ ?
လဲ့ယွိချန်: ခင်ဗျားရဲ့မေးခွန်းဟာ အချို့သောအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အဓိကအသွင်အပြင်နှစ်မျိုး ရှိနေတာကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် အမှန်ဖော်ပြလိုက်တာပဲ။ ပထမတစ်ချက်က သူတို့ဟာ လိမ်တဲ့နေရာမှာ မြန်တယ်။ ဒုတိယအချက်က သူတို့ဟာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ကြတယ်။
မလိမ်ညာရဘူးလေ- အဲဒါဟာ လူတန်းစား အလွှာအားလုံးအတွက် အရေးကြီးဆုံး အခြေခံ စံနှုန်းဖြစ်လို့ အဲဒီ အစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ အဆင့်မြင့်သံတမန်တွေကို ဒီအတိုင်းပဲ လွှတ်ထားလိုက်ကြတာပေါ့ ။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ သဘောမတူလို့ရတယ် ၊ စိတ်ပျက်လို့ရတယ် ၊ ငြင်းပယ်လို့ရတယ် ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာမှတ်ချက်မှ မပေးဘဲလည်း နေလို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကောလာဟလတွေကိုတော့ ခင်ဗျားလျစ်လျူရှုထားလို့မရဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း အချို့အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို သိက္ခာချဖို့ အထူးတလည် အလိမ်အညာတွေပြောနေကြတာပါပဲ။ သူတို့ဟာ ရိုင်းပြစော်ကားမှုတွေကိုတောင် အရှက်အကြောက်မဲ့ လုပ်နေကြတယ်။ အခြားလူတွေကြားမှာတော့ သူတို့က အမေရိကန်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးနေတယ် ၊ တရုတ်နိုင်ငံက အမေရိကန်နိုင်ငံကို အုပ်စီးချင်နေတယ် ၊ အမေရိကန်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးမလုပ်တော့ဘူး ၊ COVID-19 ရောဂါဟာ ဝူဟန့်ဇီဝ ဓာတ်ခွဲခန်းက ဖန်တီးထားတာ ၊ တရုတ်နိုင်ငံဟာ အမေရိကန်ရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ ဉာဏမူပိုင်ခွင့်ကို ခိုးယူနေတယ် ၊ ဟွာဝေး ၊ TikTok နဲ့ အခြားကုမ္ပဏီတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တွေကို တိုက်ရိုက်စုဆောင်းပေးနေတယ် ၊ တရုတ်ပြည်သူ ၁.၄ ဘီလီယံဟာ တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ စောင့်ကြည့်ခံရတာ၊ မတရားပြုကျင့်ခံရတာတွေ ဖြစ်နေတယ်။ တရုတ်အစိုးရဟာ ရှင်းကျန်းဒေသမှာ လူမျိုးစုရှင်းလင်းရေးနဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ မတရားပြုကျင့်မှုတွေ လုပ်နေတယ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ အလိမ်အညာတွေလျှောက်ပြောနေတာပဲ။
ဒီလို တရစပ်ပြောနေတဲ့အရာတွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေ နဲ့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိတဲ့ ရယ်စရာသိပ်ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲမို့ ကလေးတွေကိုတောင် သူတို့သွားပြီး လိမ်ညာ လှည့်စားလို့မရပါဘူး။ အချို့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဟာ အဲဒီနိုင်ငံရေး လိမ်ဆင်ဇာတ်လမ်းတွေကို စုဆောင်းနေကြပြီး သူတို့ ကို ပြန်ချပြဖို့ စီစဉ်နေကြတယ် ၊ တစ်ကြိမ်ချပြလိုက်တာနဲ့ အဲဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် မကောင်းတဲ့ သာဓက အမူအကျင့်တစ်ခုကို မြင်တွေ့ခွင့်ရစေမှာပေါ့။
ဥပဒေချိုးဖောက်နေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် အသုံးချနေတယ် ၊ အခြားသူတွေကိုသာ နိုင်ငံတကာဥပဒေအကြောင်းပြောမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကတော့ “ အမေရိကန်က ခြွင်းချက်ဝါဒီ”ပဲလေ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နိုင်ငံတကာဥပဒေအထက်မှာထားတယ်။ တရုတ်မှာ ဘယ်ကိစ္စမဆို ဥပဒေအခြေခံအကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ အမေရိကန်က ဆန့်ကျင်ပြီး အမြဲပြောတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့လုပ်ရပ်တွေကျတော့ ဘယ်ဟာမှ နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိဘူး ၊ အခွန်တိုးမြှင့်တာ ၊ ဟွာဝေး ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေ ဖြတ်တောက်တာ ၊ TikTok ကို ပိတ်ပင်တာ ၊ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကို ဖမ်းဆီးတာ ၊ ထိုင်ဝမ်ကို စစ်လက်နက်ရောင်းချပေးတာ ၊ တရုတ်ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ဟောင်ကောင်အစိုးရအရာရှိတွေအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုလုပ်တာ ပြီးတော့ ဟူစတန်မှာရှိတဲ့ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးပိတ်ပစ်တာ စတာတွေပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လျှောက်သွားပြီးဟိုဟိုဒီဒီ နေရာစုံ တော် လှန်ပုန်ကန်မှုတွေဖြစ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဆိုရင် ဘာ ဥပဒေ ၊ ဘာတရားမျှတမှုမှ လုံးဝ လေးစားလိုက်နာခဲ့တာ မရှိဘူး။ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာ ၊ ပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးကို နိုင်ငံရပ်ခြားက ခြေတံလက်တံရှည်နဲ့ လွှမ်းမိုးဖို့လုပ်တာ ၊ အင်အားသုံးခြိမ်းခြောက်တာတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် သတ်ဖြတ်တဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေကိုတောင် လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာက နုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒါကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ ချန်ပီယံဆိုပြီး သူရဖူပြန်ပေးတယ်။ အမှန်စင်စစ် COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ဖို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ရမယ့်အရေးကြီးကာလမှာ အမေရိကန်ဟာ WHO အပေါ် အခြေအမြစ်မရှိတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေ လုပ်ခဲ့တယ် ၊ အဲဒီကနေ ထွက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ WHO ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်။ ဒါက ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုရင် တစ်စုံတစ်ယောက်က မီးငြိှမ်းသတ်ဖို့ အလုပ်ရှုပ်နေချိန်မှာ အမေရိကန်က ရေပိုက်တွေကို လိုက်ပိတ်နေတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်လိုက်သလို နိုင်ငံတကာဥပဒေ အခြေခံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဉာဉ်စာချုပ်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာပါပဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာ အခြေခံ စည်းမျဉ်းတစ်ခုအပေါ် ပြုမူ ကျင့်သုံး စေချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တန်းကျတော့ အမည်ခံ “စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ” က အလကားပဲ။ အင်အားသုံးနိုင်ငံရေး နဲ့ အမေရိကန်အခွင့်ထူးခံ ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ သူတို့လိုချင်တာ သူတို့အကုန်လုပ်သွားတယ်။ ယခင် ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Yovanovitch ပြောခဲ့သလိုပဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ “ blunt and amoral ” ကြောက်ရွံ့မှု ၊ ခြိမ်းခြောက်မှု နဲ့ ရှုပ်ထွေးမှု နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုလက်ကိုင်ထားလို့ အချိန်ကြာကြာ ဆွဲပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။
Guancha : အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမား အချို့ဟာ တရုတ်-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံအကြား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး အတွေးအခေါ်နဲ့ ရန်စတာ ၊ သူတို့ရဲ့ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးမူဝါဒနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေကို ဘေးတီးပေးတာ အဲဒီလို တရုတ်နိုင်ငံကို ဆန့်ကျင်ဖို့ အလုံးအရင်းနဲ့ချဉ်းကပ်မှုပုံစံ တစ်ခုလုပ်နေကြတယ်။ အမေရိကန်ဟာ နိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသအသီးသီးမှာ သူတို့ရဲ့ နယ်ရုပ်လေးတွေ ဒါမှမဟုတ် သူတို့မြှောက်ပေးထားသူတွေ ရဲ့ စာရင်းတစ်ခု ကိုင်ထားတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့အကောင်အထည်ဖော်ချင်တာတွေဖြစ်လာဖို့ အဲဒီ သင်္ကြန်အမြှောက်ဆံ တွေကို အသုံးချပြီး သူတို့လိုချင်တာ ရအောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို ခင်ဗျားထင်လား။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ဆွဲချပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲ တစ်ခုထဲကို ဝင်နေသလား?
လဲ့ယွိချန် : မကြာသေးခင်က တရုတ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး အယူအဆကို လောင်စာဆီထည့်ဖို့ နဲ့ ၂၁ ရာစု စစ်အေးတိုက်ပွဲကို ပြန်ကျင့်သုံးဖို့ ရည်ရွယ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ McCarthyism ဝါဒ ပြန်အခြောက်ခံရသလိုပဲပေါ့။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်က အမေရိကန်မှာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ရောဂါအဖျားတက်ချိန် နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ တရုတ်လူမျိုးထောင်ပေါင်းများစွာကို " သူလျှို"တွေ ဆိုပြီး သံသယရှိခဲ့ကြတယ်။ လူပေါင်း သန်း ၂၀ ကျော်ဟာ စစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်။ အသက် သုံးနှစ် အရွယ်ကလေးတောင် " သစ္စာစောင့်သိ ရိုသေပါမည်" ဆိုပြီး ကျမ်းကျိန်ရတယ်။ " အိပ်ယာအောက်မှာ အနီတွေကိုရှာကြ" ဆိုပြီး သွေးရူးသွေးတန်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံက သိပ္ပံပညာရှင်များစွာဟာ စုန်း အမဲလိုက်ခံရသလို အလိုက်ခံရတယ်။ ပြီးတော့ အမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့ တရုတ်ကျောင်းသားတွေဟာလည်း နှောင့်ယှက်ခံရတာ နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တားမြစ်ခံရတာတွေကို ကြုံတွေ့နေရတာဟာ အဲဒီ McCarthyism ဝါဒ အမှောင်ခေတ်ကို ပြန်ပြီး ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့ တရုတ်နွယ်ဖွား သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ၊ ပါမောက္ခတွေ နဲ့ တရုတ်ပညာတော်သင်တွေရယ် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထောက်ခံတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရယ်ဟာ ကြောက်ရွံ့မှု အထွဋ်အထိပ်ကိုရောက်နေကြရတယ်။ သူတို့ထဲက ဘယ်သူမှ လုံခြုံတယ်လို့ မခံစားရတော့ဘူး။ သူတို့ဟာ ကြားဖြတ်ထောက်လှမ်းခံရတာ ၊ ရှာဖွေခံရတာ ၊ဒါမှမဟုတ် ဘယ်အချိန်မဆို FBI ရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းတောင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ လူမျိုး နဲ့ အယူအဆ အပေါ်အခြေခံပြီး အရေးယူမှု လုပ်တာ သိပ်ကို အန္တရာယ်များပါတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကွန်မြူနစ်တွေကို နှိိပ်ကွပ်တာ နဲ့ ဂျူးတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အဒေါ့ဟစ်တလာ နဲ့ ဖက်ဆစ်စနစ်ကို မမေ့ပျောက်သင့်ပါဘူး။ ဒီအရာတွေကနေ ကျွန်တော်တို့ သင်ခန်းစာယူရပါမယ်။ တကယ်တမ်းတော့ သူတို့ရဲ့ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး ရူးသွပ်မှုနဲ့ သူတို့ပြောပြောနေတဲ့" အနီခြိမ်းခြောက်မှု"ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေက တရုတ်-အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး အယူအဆကို သွတ်သွင်းဖို့ နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို ထိန်းချုပ်ဖို့ သူတို့ရဲ့ တကယ့်မဟာဗျူဟာကို ဖုံးကွယ်ထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီနှစ်ခုကို အတူတကွ ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ " လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစီရဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်း" လို့ အမည်တပ်လိုက်ကြတာဖြစ်သလို အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ တရုတ်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့ အုပ်စုတစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်ကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ အတိတ်ထဲမှာပဲ နေနေပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲဟာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ သွားခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတော့ မေ့ပစ်ထားကြတယ်။ ပြီးတော့ အခုမျက်မှောက်ခေတ်ဟာ ၂၁ ရာစုထဲက ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ နိုင်ငံအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ပြဿနာတွေထဲ အမေရိကန် ဝင်ပါလာတာကို ငြင်းဆန်နေကြပြီး အခြား တစ်နိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် နှစ်နိုင်ငံ ထက်ပိုတဲ့ အမေရိကန်သစ္စာခံတွေလောက်ကပဲ အဲဒါကို လက်ခံကြတာပါ။ သူတို့အားလုံး စဉ်းစားတာက COVID-19 နှိမ်နှင်းရာမှာ အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ဖို့ ၊ အသက်တွေကို ကယ်တင်ဖို့ နဲ့ စီးပွားရေး နာလန်ထူအောင်ပြန်လုပ်ဖို့ပေါ့။ သူတို့ဟာ ခါးသီးတဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး အယူအဆနဲ့ စစ်အေးတိုက်ပွဲ အသစ်တစ်ခုကို လုံးဝ စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ မကြာသေးခင်က နိုင်ငံပေါင်း ၄၈ နိုင်ငံက နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်(ဟောင်း) တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ " တရုတ်နိုင်ငံကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စစ်အေးတိုက်ပွဲသစ်တစ်ခုဟာ လူသားတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်" ဆိုပြီး အွန်လိုင်း လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု တောင် ဦးဆောင်လုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ သူတို့က " စစ်အေးတိုက်ပွဲသစ် မလုပ်ပါနဲ့"ဆိုတဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ဘာသာစကားပေါင်း ၁၄ မျိုးနဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ထက်ခြမ်းခွဲတာ နဲ့ အုပ်စုဖွဲ့တာတွေ ရပ်တန့်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ခိုင်ခိုင်မာမာ တောင်းဆိုမှုတစ်ခု ပဲပေါ့။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွန်ပီယိုကိုယ်တိုင်လည်း တရုတ်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့ နိုင်ငံတကာ မဟာမိတ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရမှာ ခက်ခဲတယ်လို့ ဖွင့်ဟ ဝန်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံများစွာက တရုတ်နိုင်ငံကို ထောက်ခံနေခြင်းအပေါ် " အံ့ဩကြောင်း နှင့် လက်မှိုင်ချကြောင်း" ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Guancha: အမေရိကန်နိုင်ငံက TikTok ကို ပိတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာ။ ပြီးတော့အဲဒီကုမ္ပဏီကို အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ထံ ၄၅ ရက်အတွင်း အပြီးရောင်းချသွားဖို့ ပြောနေပါတယ်။ TikTok နဲ့ WeChat တွေကို ပိတ်ပစ်ဖို့ သမ္မတအမိန့် နှစ်ခု ကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အကြီးတန်းအရာရှိတွေကလည်း တရုတ် APPs တွေအပါအဝင် ဟွာဝေးနဲ့ အခြားသော တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ်မှာ အမေရိကန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာဖြစ်မယ်လို့ ခင်ဗျားထင်ပါသလဲ ?
လဲ့ယွိချန် : ခင်ဗျားမေးခွန်းက ကျွန်တော့်အတွက် အွန်လိုင်းပေါ်က ကာတွန်းတစ်ခုကိုသွားပြီး သတိရစေပါတယ်။ အဝင်လမ်းဝမှာ အမေရိကန်က " လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု" ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကို စိုက်ထူထားတယ်။ လမ်းပေါ်မှာတော့ Tik Tok ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဝက်ပေါက်လေးတစ်ကောင်က လမ်းလျှောက်ရင်း စားရင်း သွားနေတယ်။ လမ်းအဆုံးမှာ ဘယ်သူစောင့်နေလဲဆိုရင် အန်ကယ်ဆမ်ကြီး ( Uncle Sam)ပေါ့ ၊ ဓားကြီးတစ်ချောင်းကိုင်လို့ အဲဒီဝက်ကြီး ပိုပြီး ကြီးထွားမလာခင် အသားဖော်ပစ်ဖို့အသင့်စောင့်နေတယ်လေ။ အဲဒါဟာ ဒီနေ့ခေတ် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ တကယ့် ပုံရိပ်စစ်ပဲ။ TikTok ဟာ အမေရိကန်မှာ မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းတွေက အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ထိုးနှက်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။ ဘာသက်သေအထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘဲနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရဟာ ကျူးလွန်ကောင်းကျူးလွန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်ပေါ် အခြေခံပြီး Tik Tok ကို အရေးယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ၄၅ ရက်အတွင်း ရောင်းရင်ရောင်း မရောင်းရင်ပိတ်မယ်ဆိုပြီးအတင်းအကျပ်လုပ်ဖို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ကုမ္ပဏီ ရှင်သန်ဖို့အတွက် TikTok ဟာ တစ်နှစ်နီးပါး အမေရိကန်မှာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်။ အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့အားလုံးနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရသေးတယ်။ အမေရိကန် နဲ့စင်ကာပူမှာ ရှိတဲ့ အမေရိကန်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အချက်အလက်ကို ထိန်းသိမ်းပေးရတယ် ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးမူဝါဒ နဲ့ ပေါက်ကြားမှုမဖြစ်အောင် သင်္ချာအရင်းအမြစ်တွေ သုံးပြီး ကုတ်တွေ လုပ်ရတာ ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁,၅၀၀ လောက် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ရတာ ၊ နောက်ထပ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၁၀,၀၀၀ ဖန်တီးပေးတာတွေပေါ့။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အမေရိကန်ဘက်ကတောင်းဆိုတာတွေ အားလုံးနီးပါးကို လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မဖြစ်သေးပါဘူး။ တကယ်လို့အဆုံးသတ်သွားရင်တောင်မှ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ငွေလုံးငွေရင်း ခွဲတမ်းတစ်ခု အတွက် မဖြစ်မနေ ပေးရမှာပါ။ ဒါဟာ အနုပညာဆန်တဲ့ ဘယ်လို သဘောတူညီမှု ပုံစံမျိုးလဲ ၊ ဒါဟာ ဂိုဏ်းစတားပုံစံ နဲ့ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လုယက်မှုပဲပေါ့။ TikTok က ဘာ အပြစ်တွေ ကျူးလွန်ထားလို့လဲ ၊ ဒါက အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့နဲ့ အလုပ်တွေဖြန့်ဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ လုပ်စရာဘာအကြောင်းမှ မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ မှားယွင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အမြဲတမ်းပဲ အခန့်သင့်ဇာတ်လမ်းထွင်နိုင်တယ်။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ညှိနှိုင်းမှုတွေ ဘယ်လိုပဲ လုပ်ပါစေ အမေရိကန်က TikTok ကို ညှစ်သတ်ချင်နေတယ်။ အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်က တရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်နေလို့ပဲ။ အချို့သော တရုတ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေ မှတ်ချက်ရေးကြသလိုပဲ။ အမေရိကန်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ " လုံးဝ အရှက်သိက္ခာမရှိဘူး"။ တရုတ်နိုင်ငံက ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဖိနှိပ်ဖို့ အမေရိကန်သမ္မတကအစ အာဏာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အမေရိကန်အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးဟာ ဂိုဏ်းစတား ဖြစ်နေကြပြီ။ ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် ယုန်ငယ်တစ်ကောင်ကို ကျားတွေအများကြီး ဝိုင်းဆွဲနေသလိုပဲ။ အမေရိကန်ရဲ့ ဓားပြတိုက်မှုနဲ့လုယက်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့်ကို ဘာသတိပေးနေလဲဆိုရင် ဟွာဝေးဘယ်လိုအလုပ်ခံလိုက်ရလဲဆိုတာပဲပေါ့။ အဲဒီလို အလားတူ စွပ်စွဲမှု ဇာတ်လမ်းမျိုးစုံနဲ့အတူ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဟွာဝေးကို ဆွဲချဖို့ အမဲလိုက်နေတယ်။ Ms. Meng Wanzhou ကိုယ်တိုင်တောင် ကနေဒါမှာ အဖမ်းခံရပြီး ရက်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝ နေနေရတယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ကျောရိုးဆစ်တွေကို ပြုတ်ထွက်သွားအောင် လုပ်လိုက်နေတာပဲပေါ့။ အဲဒီလုပ်ငန်းက အမှုဆောင်အရာရှိတွေကိုလည်း အမေရိကန်သွားလို့မရအောင် လုပ်ထားသေးတယ်။ လူတွေက မကူညီနိုင်တော့ မေးကြတယ်။ ဘယ်မှာလဲ အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ပြောပြောနေတဲ့ လွတ်လပ်သောဈေးကွက် ၊ ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှု နဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး။ အချို့သော နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ရေးကြတယ်။ အမေရိကန်ဟာ "နည်းပညာတစ္ဆေ" ခြောက်ခံရတယ် ။ "ဒီဂျစ်တယ် လက်နက်တင်ထားတဲ့ လှေကြီး မူဝါဒ" ကို ဆုပ်ကိုင်နေရင်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အမှန်စင်စစ်သူတို့ဟာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို အခြားနိုင်ငံတွေက သူတို့ကိုကျော်ပြီး ရသွားမှာကို ကြောက်လန့်နေတာ။ သူ့ကိုယ်ပေါ် အားလုံး အစွန်းအထင်းဖြစ်အောင် လုပ်နေရင်း " ကွန်ရက်တွေကို ရှင်းထုတ်မှု" တစ်ခုလုပ်နေတယ်။ အမေရိကန်ဟာ အင်တာနက်(Internet) ကို သူ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားသက်သက်ဖြစ်ဖို့ " US-net" တစ်ခုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပစ်နေတယ်လေ။
Guancha: အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ တစ်ကိုယ်တော်ဝါဒကျင့်သုံးပြီး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ သဘောတူစာချုပ်တွေကနေ နုတ်ထွက်နေတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားအတွက် အကြီးမားဆုံး မတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ပြီးတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း သိပ်ကို မသေချာမရေရာမှု ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ခင်ဗျားဘယ်လိုထင်လဲ။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ တရုတ်နိုင်ငံ က ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ?
လဲ့ယွိချန်: အမေရိကန်ဟာ အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်ဖို့နဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ဖို့ မီးစာထည့်နေတယ် ၊ မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်ကို တိုက်ခိုက်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး ဟန်ချက်ပျက်အောင်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နေတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့(WTO) နဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) တွေအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မသာယာတဲ့အနေအထား ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုယန္တရားနဲ့ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်တွေကို အန္တရာယ်ထဲတွန်းပို့နေတယ်။ သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်က အခြားနိုင်ငံအားလုံးထက် အမေရိကန်ကပဲ အရှင်သခင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး(uni-polar) ပုံစံကို သွတ်သွင်းဖို့ ဦးတည်လုပ်နေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းကို အမေရိကန်မှုပြုခြင်း" Americanization" ပေါ့။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရားကလည်း အမေရိကန်ရဲ့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးဝါဒအတွက် လမ်းခင်းပေးထားတယ်လေ။ အမေရိကန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထား ဆန္ဒကို လှည့်ပစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်။ ဒါက ကျရှုံးမယ့် လမ်းကို သွားနေတာပါပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ လူသားမျိုးနွယ် အေးအတူ၊ ပူအမျှအသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ဦးတည်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဒီကတိကဝတ်ဟာ တရုတ်လူမျိုးတို့ရဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာ စံနှုန်းတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ " တစ်ကမ္ဘာလုံးကောင်းစားရေး"နဲ့ " လူသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သဟဇာတဖြစ်ရေး" အတွက် အရင်းခံပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအရာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လည်း မျှဝေသွားသင့်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာကြီးကို အုပ်ချုပ်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမျှ မရည်ရွယ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူက တစ်ကမ္ဘာလုံး ကောင်းစားရေးအတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားချင်တာပဲရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပဲ အားထုတ်နေတာပါ ၊ အထွဋ်အထိပ်အာဏာအတွက် အမေရိကန်ကို ပြိုင်ဆိုင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လူမှုဘဝတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့တစ်ခုပဲ လုပ်နေတာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုမှာ တက်ကြွတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပဲ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ နစ်နာအောင် လုပ်ဖို့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဓိကအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အဆင့်အတန်း အနေအထားကြောင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာပါ ။ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးမှာဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ နဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေထက် ပိုများပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထိန်းချုပ်ခဲ့ပုံ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကို ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ဒဏ်ကို ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံတွေကိုပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ WHO ရဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ် ထောက်ခံအားပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကို မြှင့်တင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ ဖြန့်ချိဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ ပုံစံက လုံးဝ မတူညီဘဲ ကွဲပြားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ဖို့ အလွန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာ အမေရိကန်က တခြားလူတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ သူ့အတွက်ပဲ သူကြည့်ပြီး ကာကွယ်ဆေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့နဲ့ လျှို့ဝှက်စွာ သိုမှီထားဖို့ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ အယူအဆပိုင်းအရကြည့်ရင် တရုတ် နဲ့အမေရိကန်ကြား ခြားနားချက်ဟာ နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်း နဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ အချို့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပုံဖော်နေသလို " ဖိနှိပ်သူနဲ့ လွတ်လပ်သူ" မျိုးမဟုတ်ဘဲ ၊ သို့သော် တစ်ကိုယ်တော်ဝါဒကျင့်သုံးသူ နဲ့ အားလုံးပါဝင်သောဝါဒ ကျင့်သုံးသူအကြား ၊ ညီမျှမှုနဲ့တရားမျှတမှုမှာ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးသူနဲ့ အခြားတစ်ဖက်မှာ " အမှန်တရားအတွက် လုပ်ကိုင်သူ " အကြား ၊ အားလုံးကောင်းဖို့ လုပ်ကိုင်သူနဲ့ အမေရိကန်ပထမ လုပ်ကိုင်သူအကြား ခြားနားချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာကြီးမှာ သိပ်ကိုရှင်းလင်းတဲ့အရာတစ်ခုက တစ်ယောက်က သွားစရာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရှိနေပြီး သမိုင်းအခင်းအကျင်းကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တရားမျှတရေးကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ကလူသားအားလုံးဟာ အမေရိကန်ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဝါဒကျင့်သုံးမှုတွေ နဲ့ အာဏာနိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို လည်း အကြောင်းပြချက် ပေးတဲ့နေရာ ၊ ဥပဒေနဲ့ တရားစီရင်မှုတွေမှာ မှန်ကန်တဲ့အစိတ်အပိုင်း ဆီပြန်ရောက်သွားအောင် အတူတကွ ဝိုင်းဝန်းတွန်းပို့ကြရမှာပါ။
Guancha: ထရမ့် အစိုးရအဖွဲ့ဟာ အမြဲလိုလို တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) ကိုတိုက်ခိုက်နေတာနဲ့ တရုတ်ပြည်သူတွေကို CPC ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်နေပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တရုတ်ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်တယ်ဆိုပြီး ပြောနေတယ် ။ ဒီအရာတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျား ဘာပြောချင်လဲ?
လဲ့ယွိချန်: CPC အပေါ် ရန်လိုတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားအချို့ရဲ့ မှတ်ချက်စကားတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပါတီအပေါ်သူတို့ရဲ့ လျစ်လျူရှုမှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ CPC ဟာ တရုတ်ပြည်သူတွနဲ့ ခွဲခြားလို့မရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါ ၊ မိုးရွာရွာ နေပူပူ သူတို့နဲ့ အတူတကွ ရပ်တည်ခဲ့တာပါ။ပါတီရဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှုဟာ သမ္မတရှီကျင့်ဖိန်ရဲ့ အထင်ကရ အဆိုအမိန့်တစ်ခုလိုပဲ “ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့ အတွက် ၊ ကျွန်တော်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အရာတွေကို အဲဒီဘက်မှာပဲ ပို့ထားပါတယ်”။
မကြာသေးခင်နှစ်တွေက CPC အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် အမြဲတမ်း ကူညီစောင်မပေးခဲ့တယ်။ နိုင်ငံကို COVID-19 ကပ်ရောဂါ ရိုက်ခတ်လာချိန်မှာလည်း တစ်နိုင်လုံးမှာရှိတဲ့ CPC အဖွဲ့ဝင် ၃၉ သန်းကျော်ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ ရှေ့တန်းက ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဝူဟန့်မြို့ကို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ စေလွှတ်မှုအနက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ CPC အဖွဲ့ဝင်တွေပါ။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေးစစ်မျက်နှာမှာလည်း CPC အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အဓိက အနေနဲ့ကောင်းစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ CPC အဖွဲ့ဝင် သုံးသန်းနီးပါးကို ရွေးချယ်ပြီး ပါတီအတွင်းရေးမှူးတွေ အဖြစ် သို့မဟုတ် ကျေးရွာတွေမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေး တာဝန်ခံတွေအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အရာရှိကြီး ၈၀၀ နီးပါးဟာ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို အဆုံးစွန် ပေးဆပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Guangxi မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေး သွားရောက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Huang Wenxiu ဟာ ဆိုရင် အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ်မှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်တုန်းကလည်း CPC အဖွဲ့ဝင်တွေပဲ ရှေ့တန်းမှ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပြန်တယ်။ CPC အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Chen Lu ဟာဆိုရင် အန်းဟွေးပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ ရေကြီးရေလျှံမှုမှာ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး မီးသတ်သမားတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကို CPC ရဲ့ သင်ကြားပို့ချမှုတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ကျွန်တော်တို့ကို လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လာခဲ့မယ် ဆိုပြီး စံနမူနာပြုခဲ့သူပါ။ အဲဒီလို အလားတူ စံနမူကောင်း ပုံစံတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ CPC ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး အမေရိကန် အနည်းစုအစား တရုတ်ပြည်သူတွေကသာ အကဲဖြတ်ရမှာပါ။ CPC ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေး တွန်းအားပေးမှုတွေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ တုံ့ပြန်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ် များစွာသော အမေရိကန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက သူတို့ရဲ့အမြင်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသလို တရုတ်ပြည်သူအများစုက CPC ကို ထောက်ခံတာ နဲ့ သူတို့နိုင်ငံအပေါ် ဂုဏ်ယူတာကို အပြည့်အဝ ဖော်ပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက ပြုလုပ်တဲ့ လူထု စစ်တမ်းကောက်ခံမှုမှာ တရုတ်ပြည်သူတွေအကြား CPC ကို ထောက်ခံမှုဟာ အမြင့်ဆုံးပမာဏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေတာကို ဖော်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလောက်ထိ အမြင့်ဆုံး ပမာဏနဲ့ လူထု ထောက်ခံမှုဟာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ပါပဲ ၊ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကမှ အဲဒီလောက်ထိ လူထု ထောက်ခံမှု မရဖူး ပါဘူး။
တရုတ်-အမေရိကန် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးကာလအတွင်း CPC ဟာ နှစ်ဖက်ဆံရေးမှာ အဟန့်အတားတစ်ခု ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်အနေနဲ့ CPC ဟာ နှစ်ဖက် အပြန်အလှန် အကျိုးစီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတွက် ဦးဆောင်မှု နဲ့ မောင်းနှင်မှု အားပဲ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ဘာကြောင့် CPC ကို ရန်သူလို သဘောထားနေလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ သိပ်ကို ခက်ခဲနေတယ်။ နောက်ဆုံး လေ့လာသုံးသပ်မှုမှာ CPC ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အမေရိကန်သမ္မတ ရစ်ချက်နစ်ဆန်နဲ့ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကို ဖြတ်ကျော်ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ CPC ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အမေရိကန်တွေနဲ့ တရုတ်-အမေရိကန် သဘောတူညီချက်သုံးခုကို တရားဝင် သဘောတူကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်၊ အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဖြူတော်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ နေ့စဉ်လိုလို CPC အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး CPC ဟာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အမေရိကန်အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်သွားရတာလဲ ၊ အဲဒီကတည်းက CPC ဟာ မပြောင်းမလဲဘဲ ရှိနေခဲ့တော့ ပြဿနာဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားတွေဆီမှာပဲ ရှိနေလို့ပေါ့။
Guancha: အမေရိကန်ရဲ့ ဖြိုခွင်းမှုနဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေကို တရုတ်နိုင်ငံက ဘယ်လို ပြန်လည်တုံ့ပြန်သင့်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပမှာ အမြင်နှစ်မျိုး ကွဲပြားနေတာရှိပါတယ်၊ တစ်ဖက်က အမြင်က တရုတ်နိုင်ငံဟာ သူတို့ကိုပါ အပေါ်ရောက်အောင် ဆွဲတင်သင့်တယ် ၊ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေကို သူတို့နဲ့အဆင့်တူ ဖြစ်အောင် ကိုယ်ကိုယ်ကို လိုက်ပြီး နိုမ့်ချတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး ၊ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ တရုတ်-အမေရိကန် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး ထောင်ချောင်ထဲကို တိုးမဝင်သင့်ဘူး လို့ ပြောကြတယ် ။ အချို့တွေရဲ့အမြင်ကျတော့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ အားနည်းတဲ့ပုံစံမျိုး ပြမနေသင့်ဘူး ၊ အပြန်အလှန် လက်တုံ့ပြန်မှုနဲ့ ပြန်ပြီး တိုက်ခိုက်သင့်တယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဲဒီနှစ်ခုထဲက ဘယ်နည်းလမ်းကို ခင်ဗျား သဘောတူလဲ?
လဲ့ယွိချန်: တရုတ်နိုင်ငံဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို အမြဲကျင့်သုံးတယ် ၊ နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးဖို့ နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အမြဲမျှော်လင့်တယ်။ တရုတ်ပြည်သူတွဟာ ပွင့်လင်းကြတယ် ၊ ရိုးသားကြတယ် ၊ ဖြောင့်မတ်ကြတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရန်လိုမှု မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့က အနိုင်မကျင့်တတ်ဘူး ။ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို သိုသိပ်စွာနေထိုင်မှုနဲ့ကရုဏာတရားရှိမှုဟာ အမှန်နဲ့အမှား ဒါမှမဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ လက်လျှော့ခြင်း အဲဒီလို မမြင်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေတယ်လို မဆိုလိုပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အဓိကအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ ကိစ္စရပ်မျိုးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ လွယ်လွယ်ကူကူ နောက်ဆုတ်ဖို့ အကန့်မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ တစ်လက်မ အလျှော့ပေးလိုက်ရင် သူတို့က ကျနော်တို့ကို နောက်ထပ် တစ်မိုင် ထပ်တောင်းဆိုမယ် ၊ ဆာလာမီနည်းဗျူဟာ (salami tactics) အတိုင်း ထပ်လာမှာပေါ့။ သူတို့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို သေးသိမ်အောင် ဘယ်တော့မှ လုပ်လို့မရပါဘူး၊ အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့အချို့သော လူတွေဟာ ကောလာဟလတွေဖြန့်တာ တရုတ်နိုင်ငံကို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်တာတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အမြဲ ဘာမှမလုပ်ဘဲ တိတ်ဆိတ်နေမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းပါ အဲဒီလိမ်လည်မှုတွေနောက် အလွယ်တကူပါသွားကြမှာပေါ့။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာမှုန့်ပါဝင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုပြွန်လေး ကနေ အီရတ်နိုင်ငံကို ပျက်စီးစေခဲ့တယ်။ ဓာတုလက်နက် အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲထားတဲ့ ဓာတ်ပုံအနည်းငယ်လောက်နဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံလည်း လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ခံစားရစေတယ်။ ဒီလို ကြေကွဲစရာအဖြစ်မျိုး တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက် စည်းမျဉ်းတွေက အင်မတန်ရှင်းလင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ရန်စတာမျိုးမရှိလည်းမရှိသလို ရန်စတာမျိုးရှိလာခဲ့ရင်လည်း နောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လူဆိုးတွေရဲ့ ထိုးနှက်မှုတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့က စိတ်လှုပ်ရှားမှာ မဟုတ်သလို သူတို့ရဲ့ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုတွေကိုလည်း ခုခံပြောဆိုနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစပြီး ဘယ်တော့မှတော့ မပစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှု တိုင်းဟာ လည်း မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်မယ် ။ ဒါဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) တည်ထောင်ကတည်းက နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးနဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၇၀ ကျော်ရှိကာလအထိ ကျင့်သုံးခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ အခက်အခဲတွေအားလုံးကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ကန့်သတ်ဖို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ရပ်တည်နိုင်ရုံမက ရှင်သန်ကျန်ရစ်နေပါတယ်။ ရဲဘော်ကြီး တိန့်ရှောင်ဖိန်က တစ်ချိန်က ဒီလိုပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ “သီးသန့်၊ ပိတ်ဆို့မှု သို့မဟုတ် အရေးယူမှုတွေကို ကြောက်ရွံ့တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က နောက်ဆုံးနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံပဲ” ။ အမေရိကန်ရဲ့ လတ်တလော တရုတ်နိုင်ငံ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသက တာဝန်ရှိသူ ၁၁ ဦးကို ပိတ်ဆို့မှုတွေက ကျွန်တော်တို့ကို မခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ အဲဒီစာရင်းထဲမှာ ရှိနေလို့ ပြည်သူတွေက ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။ ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းက “အသိအမှတ်ပြုတဲ့စာရင်း” တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကြားက တင်းမာမှုကို အချို့လူတွေက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုမိုလွန်ကဲပြီး ရက်စက်မှုရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုပြီးတော့ မှတ်ယူထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောမတူပါဘူး။ နယ်မြေချဲ့ထွင်ခြင်းနဲ့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ခရီးပေါက်အောင် လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံတကာတာဝန်သိစိတ်နဲ့ ကမ္ဘာကိုပိုမိုကူညီပေးသွားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ဘုံမျှော်လင့်ချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂကို တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ကြေး ထည့်ဝင်မှုဟာ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ အကြာက တစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိရာကနေ ဒီကနေ့ ၁၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု ဘတ်ဂျက်မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ထည့်ဝင်မှုက ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိလာပါပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အခြားသောအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထက် ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု တပ်ဖွဲ့ဝင် စေလွှတ်မှုမှာလည်း သာလွန်နေပါတယ်။ အခြားသောဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဆီကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကူညီမှုဟာလည်း သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် မကောင်းပေဘူးလား။ ဒါကို ဘာများ စွပ်စွဲနေကြပါလိမ့်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အချို့က တရုတ်နိုင်ငံကို အချောင်သမားလို့ ခေါ်လေ့ရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာကြီးကို ငွေကြေးအရရော ပစ္စည်းအရကော ကူညီပေးခဲ့ပြီး ပြည်သူတွေကို ကုန်ပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ချိန်မှာကျတော့ သူတို့က ဒါဟာ မဟာဗျူဟာမြောက် ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ဗိုလ်ကျချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကြောင့် ပြောကြပြန်ရော။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရှေ့နောက်မညီ ကွဲပြားနေတာမဟုတ်ပေဘူးလား။
Guancha: တရုတ်-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး အခြေအနေက ဆိုးသထက်ဆိုးလာတယ်။ ဒါက ဘယ်လောက်ထိကြာနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဒီအချိန်မှာ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဖိအားအများဆုံးပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေက ဘာတွေလဲ?
လဲ့ယွိချန်: တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ ဟာ တစ်ဦးနှင့်နဲ့တစ်ဦး အတူနေထိုင်ဖို့ ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းက တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် ပြည်သူပေါင်း ၁.၇ ဘီလီယံရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပြည်သူ ၇ ဘီလီယံကျော်ရဲ့ အနာဂတ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ တရုတ်-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးကို ကိုင်တွယ်ချိန်မှာ လက်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာတစ်ခုထဲကိုပဲ အာရုံစိုက်မထားသင့်သလို တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး အသေးအဖွဲ ကိစ္စရပ်လေးတွေကြောင့် လမ်းကြောင်းမှန်ကနေ လမ်းလွဲသွားမယ့် အဖြစ်မျိုးကို ခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး။ ရာစုနှစ်အတွင်း မကြုံဖူးတဲ့ နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းပြောင်းလဲမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရေစီးကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုရဲ့ ပိုပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့အခြေအနေမှာ ဆက်ဆံရေးကို ထည့်သွင်းဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ တချို့ကိစ္စရပ်တွေက ဖြေရှင်းဖို့ တစ်နှစ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်နှစ်ကျော်လောက် အချိန်ယူရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းပေးတာဝန်အဖြစ် ပခုံးထမ်း ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး အမြှော်အမြင်ရှိတဲ့ သဘောထားအဖြစ် မှတ်ယူကာ ကာလရှည် ရှုထောင့်အဖြစ် လက်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ မဲပုံးပြင်ပ နိုင်ငံရေးလို့ မှတ်ယူရပါမယ် ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေကို လစ်လျူရှုဖို့၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖို့နဲ့ လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆီကို ပြန်လှည့်လာဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ဝမ်ရိက အဆိုပြုထားတဲ့ “စာရင်းကြီးသုံးရပ်” ကို စတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ရှေ့ဆက်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေဖို့ သိပ်ခက်ခဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ ပွင့်လင်းမှုရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကို ထိန်းသိမ်းရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကို ချုပ်ခြယ်မထားသင့်ပါဘူး။ တကယ်တော့ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးတွေကြားမှာ “တယ်လီဖုန်းပြောဆိုမှုမရှိတာမျိုး” မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ ဆိုလိုတာက ကိစ္စရပ်တွေဘယ်လိုပဲ ခက်ခဲ ရှုပ်ထွေးနေပါစေ သူတို့တွေအနေနဲ့ စားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲနဲ့ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းနိုင်မှာလဲ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဆင့်ရှိသူနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အချိန်မရွေး အသင့်ရှိပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အာရုံစိုက်ခြင်းပါပဲ။ နှစ်နိုင်ငံလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ နယ်ပယ်တွေမှ အများကြီးပဲ။ COVID-19 တုံ့ပြန်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက ပထမဆုံးဦးစားပေးသင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ လူ့အသက်တွေက ချိန်ခွင်လျှာပေါ်မှာ ရှိနေပြီဆိုရင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက ပထမဆုံး ဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်ပြောရရင် နှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး၊ နိုင်ငံတော်အဆင့်မဟုတ်သော ဖလှယ်မှုစတဲ့ နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွေ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု နဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ပါးရေးစတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေ၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် နျူကလီးယားအရေး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အာဖဂန်နစ္စန် စတဲ့ တင်းမာမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဧရာမအခန်းကျယ်ကြီး ရှိနေပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ မတူကွဲပြားမှုတွေကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းပါပဲ။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကြားမှာ သဘာဝအလျောက် မတူကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါကို ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ သဘောထားတစ်ရပ်နဲ့အတူ ကိုင်တွယ်သွားသင့်တယ်။ တကယ်တော့ မတူကွဲပြားမှုတွေဟာ ကျယ်ပြန့်လာရမှာမဟုတ်ဘဲ အသစ်တွေဖန်တီးရင်း သီးသန့်ထားရမှာပါ။ နှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ပြဿနာတွေ မြောက်များစွာ ရှိနှင့်ပြီးသားပါ။ ဘယ်ဟာတွေကိုတော့ ထပ်မံပေါင်းထည့်တယ်ဆိုတာထက် နုတ်ပယ်ဖို့ ပိုပြီးလိုအပ်တယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။
လာမယ့်လအနည်းငယ်ဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမျိုး အစွန်းရောက်အင်အားတွေကြောင့် ယိမ်းယိုင်သွားရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးရဲ့ လမ်းကြောင်းမှန်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ ထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့မှု ဒါမှမဟုတ် လွဲချော်မှုကနေ ကာကွယ်သွားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (Xinhua)
Previous Article ကုလသမဂ္ဂ အခြေစိုက်သတင်းထောက်ဟောင်းတစ်ဦးက ရှုမြင်ထားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ မျက်နှာနှစ်မျိုး
Next Article စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သည် ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရန် အတွက် အကောင်းဆုံးသော လက်နက် ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ တွင် တရုတ် နိုင်ငံ ပြောကြား